Ukuphupha itrektara yombungu Discover ➡ Discover online ▷ ➡️
Itrektara ekhasayo yimoto, efana netanki, eneekhonkco ezibanzi njengekhrisimesi. Ezi zibaleka nokuba kukuqhuba kunye namavili angasebenziyo okanye izileyi ezingenzi nto.
Njengesithuthi esilandelelweyo, isetyenziswa ikakhulu kwicandelo lezomkhosi. Nangona kunjalo, ezi trektara zirhubuluzayo zinokufumaneka kwizicelo zoluntu, umzekelo kwezolimo.
Kodwa kutheni ngoku itrektara ekhasa ibonakala ephupheni? Nguwuphi umyalezo onokufihlwa ngasemva kwalo mfanekiso unjengephupha? Ukutolikwa okucacileyo kwamaphupha, kuya kufuneka ubandakanye iimeko ezihamba nesimboli yamaphupha. Ke ngoko, jonga kwakhona iphupha lakho kwaye uzame ukukhumbula iinkcukacha ezininzi kangangoko kunokwenzeka.
1 Uphawu lwephupha «itrektara yombungu» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «itrektara yombungu» - ukutolikwa kwengqondo
3 Isimboli yephupha «itrektara yombungu» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «itrektara yombungu» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokwembono ngokubanzi, itrektara yombungu inakho ephupheni kwi Inkqubela phambili elungileyo yalatha kumcimbi othile. Ukuphupha kuya kuqhubela phambili kwinto enzima okanye enengxaki.
Ukuba wena uqhuba itrekta yombungu ephupheni, uya kuzifumanela indlela yakho ngempumelelo Ndiyakwazi ukuhamba. Ukuba uzibona njengomkhweli kwisithuthi esinje, uyakufuna uncedo kunye noncedo lwabanye abantu el mundo yeewotshi ukuya phambili. Inokuba ngumdla wokuba ngubani olawula umkhaseli ephupheni.
Itrektara ebalekayo esebenza ngokubhekisele kubunqabileyo njengephupha Utshintsho kwihlabathi elivukayo. Itrektara engalunganga ephupheni, mhlawumbi nangenxa yokuba uyophule ngokwakho, izisa izithintelo kunye nobunzima obuya kuthintela ukukhula komntu.
Ukuba umphuphi ufumene ingozi netrektara yombungu xa elele, oku kunokuqondwa kuhlalutyo ngokubanzi lwamaphupha njengesilumkiso sokujonga ngakumbi kwaye siphaphe ebomini bokuvuka.
Uphawu lwephupha «itrektara yombungu» - ukutolikwa kwengqondo
Imifanekiso yamaphupha "abakhasa itrektara" inokusetyenziswa kwinqanaba lengqondo lokuchazwa kwephupha njengentetho ye amandla kwaye amandla ephupha anokuchazwa oza kuthi ujongane nawo kubunzima obuzayo.
Ukubonwa ngokwetrektara, itrektara ehambahambayo ingabonisa ephupheni ukuba ungakhwela njani kweyakho Indlela yobomi qhubela phambili. Ngale ndlela, umntu oleleyo kufuneka azi ukuba akenzi nkqubela phambili ngokukhawuleza, kodwa kwinkqubela phambili ebomini bakhe nakuphuhliso lomntu. Ngolu lwakhiwo kunokuba yinto enomdla apho kubonwa khona itrektara. Ngaba wayeqhuba ebaleni okanye ebaleni? Okanye yayipakwe esibayeni?
Nabani na obona itrektara ekhasayo njengesithuthi esilandelelweyo kwimishini yemfazwe ephupheni lakhe, ngokutolikwa kwengqondo yephupha, uphawu lwangaphakathi. Imeko yengxabano. Ngale nto, umphuphi kufuneka azame ngokusondeleyo ebomini bokuvuka ukuze akwazi ukusombulula.
Isimboli yephupha «itrektara yombungu» - ukutolika kokomoya
Uhlalutyo olugqithisileyo lwamaphupha lubeka uphawu "wetrektara yombungu" njengophawu lwe umsebenzi wokomoya apho umphuphi engekawenzi kwihlabathi lokuvuka.